Yakanakisa NR poda (23111-00-4) China Manufacturer & fekitori
Cofttek ndiyo yakanakisa Nicotinamide Riboside Chloride poda inogadzira muChina. Fekitori yedu ine yakakwana yekugadzira manejimendi system (ISO9001 & ISO14001), iine pamwedzi yekugadzira inokwana 2100kg.
NR poda (23111-00-4) vhidhiyo
Molecular Kurema: 290.7 g / mol
Kemikari zita: 3-carbamoyl-1-((3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyridin-1-ium chloride
Synonyms: Nicotinamide riboside; SRT647; SRT-647; SRT 647; Nicotinamide Riboside Triflate, α / β musanganiswa
Hafu Hupenyu: 2.7 maawa
Application: Nicotinamide riboside inonzi ndiyo fomu nyowani pyridine-nucleoside yevhitamini B₃ inoshanda seamberi kune nicotinamide adenine dinucleotide kana NAD +.
Kuonekwa: Off chena kuPale Yero upfu
Muviri wemunhu chivakwa chakaomarara chakaumbwa nemaseru, zvinyama, uye masisitimu enhengo. Kushanda kwakakodzera kwemasero nematukisi mumuviri kunoitwa uye kubatsirwa nemakemikari akasiyana, maenzyme, uye zvinovaka muviri. Zvimwe zveizvi muviri unogona kuzviita wega, uye zvimwe zvinofanirwa kudyiwa. Nekudaro, izvi zvinovaka muviri zviri muchimiro chekudya uye zvinowedzera. Chimwe chezvinhu izvi chinogona kubatsira kuporesa nekugadzirisa muviri chinonzi nicotinamide riboside chloride (NR). Inobatsira kuwedzera huwandu hwenicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) mumuviri.
Chii chinonzi Nicotinamide Riboside Chloride?
Nicotinamide Riboside Chloride, inonziwo NR, inonzi pyridine nucleoside yevhitamini B3. Inoshanda sepamberi pe nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +). Inowanikwa seyakavhenekera-chena kune pendi yeruvara hupfu. Iyo ndeimwe yeakanyanya kunyatso kudzidza NAD + vatangiri sezvo iine zvakawanda zvehutano mabhenefiti.
NAD + yanga ichibatanidzwa kuve chimwe chezvinhu zvekutanga zvinoshanda pane akasiyana maitiro eostostasis mumuviri. Inogona kubatsira mukuchengetedza muviri uine hutano, ichiwedzera hupenyu hwemaseru, ichibatsira kuita akasiyana metabolic zviitiko uye kubatsira pakurapa akasiyana pathophysiologies mumuviri.
NR powder yakaratidza kushanda sekumuka kwekurapa muzvirwere zvakasiyana. Pamadosi akakwira, NR inogona kubata mamiriro akaita sezvirwere zvemoyo, neurodegenerative hosha, musculoskeletal hosha, uye kusagadzikana kwemetabolism. NR yakaratidzirwawo kunonoka kuchembera kwemasero uye kuwedzera hupenyu hwavo. Inowanikwa muzvigadzirwa zvekudya sehove, huku, mazai, mukaka uye zviyo.
Kuti tinzwisise zvinoita nicotinamide riboside chloride, tinofanira kutanga tanzwisisa nicotinamide adenine dinucleotide kana NAD +.
NAD + yakakosha coenzyme mumuviri wemunhu. Inoshanda mukuitisa nzira dzakasiyana dzemagetsi. Kuvapo kwayo mumuviri kwakakosha pakurapa marudzi mazhinji ezvirwere. Inobatsirawo kuburitsa simba rehuropi, maseru ekudzivirira, uye mhasuru.
Huwandu hweNAD + hunogona kuwanikwa kubva kune zvekudya masosi hwakanyanya kushoma. Izvi hazvina kukwana kuti masero mazhinji emuviri ashandise. Saka kuigadzira, muviri unofamba nenzira dzakasiyana siyana. Pane nzira nhatu huru dzinogona kugadzirwa neNAD +. Iyo De novo synthesis nzira, iyo Preiss Handler nzira, uye iyo Salvage nzira.
Iyo Salvage nzira ndiyo yakajairika maitiro ayo NAD + akaitwa mumuviri. Munzira iyi, NAD + inoitwa redox reaction. Zvinosanganisira kudzikiswa nemaviri-maerekitironi akafanana, ayo anozoshandurwa kuita fomu inonzi nicotinamide adenine dinucleotide (NADH). Sezvo dhayeti yekuwedzera isina kukwana kudikanwa kwemuviri weNAD +, iyo nzira yekununura inoshandisa uye kushandisa zvekare iyo yatovepo NAD + uye ayo akasiyana mafomu.
Imwe yezviito zvikuru zvinoitwa neNAD + kuvhenekera masiraini, boka rema enzymes manomwe, Sirt7 kusvika Sirt1. Aya ma enzymes ane basa rekudzora kukwegura uye kurarama kwenguva refu kwemasero. Sirtuin anoita pane akawanda maitiro emagetsi, akadai sekuburitswa kwe insulin, kuunganidzwa kwe lipids, uye kushushikana kupindura. Iyo inogona kunyange kutonga iyo hupenyu. Sirtuins inogoneswa kana NAD + nhanho dzichisimuka.
NAD + zvakare iri substrate yeboka remapuroteni anonzi poly ADP-ribose polymerase (PARP). Iyo inokonzeresa kugadziriswa kweDNA uye kugadzikana mumagenomes uye inogona zvakare kuve nemhosva yehupenyu hwakareba.
NAD + nhanho dzinodzikira nezera uye zvirwere. Zvimwe zvezvikonzero zvekudzikira kwaro kusagadzikana kusingaperi, kuwedzerwa mashandiro ezvirwere zvemuviri, uye kudzikisira nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) chiitiko, zvichitungamira mukudzikira kwaro kugadzirwa. Sezvo muviri wemunhu unokwegura, iyo DNA yekukuvara mwero inowedzera nemikana mishoma yekugadzirisa, zvichikonzera kuchembera nekenza.
Kune nzira shoma dzekuwedzera iwo mazinga eNAD + nhanho mumuviri. Ivo vari kudya zvishoma uye kudzora huwandu hwe macalorie, kutsanya, uye kurovedza muviri. Izvi zviitiko zvinogona kubatsirawo kuchengetedza muviri wakagwinya uye uchishanda.
Dzimwe nzira dzekuwedzera NAD + dzinosanganisira kushandisa tryptophan uye niacin uye kutora NAD + zvinowedzera senge nicotinamide riboside chloride uye nicotinamide mononucleotide.
Nicotinamide riboside chloride ndiyo yekumberi iyo inogona kuwedzera maseru masero eNAD +. Ichowo sosi yeVitamin B3. Icho chigadzirwa chinoshanda munzira yekununura yeNAD + kugadzirwa. Iyo inoshandura kuita nicotinamide mononucleotide (NMN) nerubatsiro rweiyo enzyme NR kinase Nrk1. Izvo zvinobva zvashandura kuita NAD +.
Mushure mekupa NR, NAD + nhanho dzinowedzera mumuviri, iyo inozogoverwa kumatunhu akasiyana. Haikwanise kuyambuka chipinga cheropa-chehuropi, asi inoshandurwa kuita nicotinamide iyo inozotamisirwa kuuropi nemamwe matishu kwainoita NAD +.
Ruzhinji rweruzivo nezve kugona kweNicotinamide Riboside chloride kunobva mukutsvaga kwemhuka. Kutsvaga-kwakavakirwa-vanhu kuchiri kushoma uye kuri kudikanwa kwazvo.
Zvakanakira Nicotinamide Riboside Chloride
Pane zvakawanda zvakanakira kushandisa Nicotinamide Riboside Chloride. Vari:
Mhedzisiro kuNeuromuscular Zvirwere
Nicotinamide riboside chloride kugona kuwedzera NAD + kunogona kugadzirisa mashandiro emitochondria. Izvi zvinogona kubatsira pakurapa mitochondrial myopathies . NR poda yakaratidzirwawo kuve inoshanda mukuvandudza mashandiro emhasuru dystrophies.
Migumisiro pazvirwere zvemwoyo
Chero matambudziko eNAD + metabolism anogona kukonzera matambudziko nemoyo uye nemidziyo yeropa. Inogona kukonzera mamiriro akaita sekutadza kwemoyo, kumanikidzwa kuwanda, myocardial infarction, nezvimwewo NR yekuwedzera inogona kuunza huwandu hweNAD + uye nicotinamide adenine dinucleotide + hydrogen (NADH) kune yakajairwa uye kumisa iyo isingafadzi kugadziridzwa kweiyo yemoyo nyama . Iyo inogona zvakare kudzoreredza mhedzisiro yekundikana kwemoyo.
Migumisiro yezvirwere zveeurodegenerative
Zvirwere zveNeurodegenerative zvinowanzoitika nekukwegura. Ivo vanobatana nekushushikana kweiyo oxidative iyo inogona kukonzera kukuvara kweDNA. Kazhinji, pachave nezviito zvisina kujairika zvemitochondria, zvichitevera zvimwe zvinhu mushure meizvozvo maseru anenge asingakwanise kushanda nemazvo. NAD + inoderera muhuwandu semazera emuviri, zvichitungamira mukusashanda zvakanaka kwemitochondria. Izvi zvinogona kukonzera akasiyana siyana neurodegenerative hosha. Inogona zvakare kuwedzera mikana yechirwere cheAlzheimer.
Nicotinamide Riboside chloride inowedzera huwandu hweNAD + mumuviri, inoderedza kusagadzikana kweiyo oxidative, uye inogona zvakare kugadzirisa yakanganisa DNA. Inobatsirawo pakurapa chirwere cheAlzheimer mumakonzo . Izvo zvinogona zvakare kudzikisa kuzvimba muuropi, zvichibatsira kusimudzira kugona uye ndangariro . Inogona kuita izvi nekuderedza huwandu hweamyloid-β preursor protein uye inhibiting amyloidogenesis.
NR poda inogona zvakare kumisa kushomeka kwemazoni mumhando dzisingaperi dzezvirwere zveeurodegenerative nekuchinja metabolism yeNR mu axon . Iko kushomeka kwemhepo inonamira ganglion neurons iyo isingakundiki macochlear maseru ebvudzi anogona kuitika zvichitevera kuratidzwa kune ruzha rwakanyanya. NR yakaratidza kuve inoshanda mukudzivirira ruzha-rwunokonzera kurasikirwa kwekunzwa. Inoita izvi nekuita pane sirtuin kana SIRT3-inoenderana nemaitiro ayo anoderedza kusagadzikana kweurourite .
Migumisiro kune vane chirwere cheshuga
Nicotinamide ribonucleoside chloride yakaratidza kuve inoshanda mukuderedza zviratidzo zvehutachiona hwehutachiona senge Type II chirwere cheshuga . Iyo yakaratidzirwa kunatsiridza kushivirira kune glucose, kudzikisa huremu uye kurapa kukanganisa kuchiropa mumakonzo. Saka zvinogona kushanda pakubata vanhu futi.
Migumisiro pahutano hwechiropa
Chiropa mamiriro akaita seasina doro doro mafuta chiropa chirwere zvakaratidzirwa kukonzera kushomeka kweNAD +. Saka, kuwedzera neNR upfu kunogona kubatsira kugadzirisa zvirinani mune aya mamiriro .
NAD + yakawanikwawo ichideredza kukwegura kwemasero uye kuvamutsiridza. Yakave yakawanikwa zvakare kuvandudza masero esero mabasa ayo zvakare anobatsira kudzikisa kuchembera .
Kubatsira kwaNicotinamide Riboside Chloride Pamusoro Pedzimwe NAD + Precursors
NR ine zvirinani bioavailability uye yakachengeteka kushandisa kana ichienzaniswa nemamwe ekutanga. Yakaratidzirwa kuwedzera mazinga eNAD + zvakanyanya pakudya kwemuromo mumakonzo uye zvakare inopa yakawanda NAD + mumhasuru ichienzaniswa neyevamwe vatangiri. Inogona zvakare kudzora huwandu hweropa lipid zvirinani uye kuwedzera mwero weNAD + mumoyo .
Side Migumisiro yeNicotinamide Riboside Chloride
Kudya kwemuromo nicotinamide riboside chloride mune yakaderera madhizaina yakachengeteka. Inogona kusanganisira mimwe mhedzisiro senge
Nzira yekutenga Nicotinamide Riboside Chloride?
Kana iwe uchida kutenga iyo NR upfu, zvakanakisa kutaura zvakananga kuNicotinamide Riboside Chloride fekitori inogadzira. Inoona kuti zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinoshandiswa kugadzirwa, pasi peziso rakatarisa revanyanzvi mundima inoenderana. Izvi zvigadzirwa zvinogadzirwa zvichitevedzera zvakadzama kuchengetedzeka mirawo inova nechokwadi chekuti chigadzirwa chiri chemhando yepamusoro, ine simba rakakura, uye yakarongedzwa nemazvo. Sezvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi, iwo maodha anogona kugadziridzwa kuti akwane iwo chaiwo maratidziro.
Kana chigadzirwa changoitwa, chinoda kuchengetwa panotonhora tembiricha 0 kusvika 4C kwenguva pfupi uye -20C yenguva refu. Iko kuzvidzivirira kubva pakuparadza kana kuita nemamwe makemikari munharaunda.
Bogan KL, Brenner C. Nicotinic acid, nicotinamide, uye nicotinamide riboside: kuongororwa kwemolesi yeiyo NAD + preursor mavitamini muhutano hwevanhu. Annu Rev Nutr. 2008; 28: 115-30. Doi: 10.1146 / annurev.nutr.28.061807.155443. Ongorora. PubMed PMID: 18429699.
Ghanta S, Grossmann RE, Brenner C. Mitochondrial protein acetylation sesero-intrinsic, shanduko yemutyairi wekuchengetedza mafuta: chemakemikari uye metabolic logic yeacetyl-lysine moditions. Crit Rev Biochem Mol Biol. 2013 Nov-Dec; 48 (6): 561-74. Doi: 10.3109 / 10409238.2013.838204. Ongorora. PubMed PMID: 24050258; PubMed Pakati PMCID: PMC4113336.
Zvese zvaunoda Kuti Uzive NezveNicotinamide Riboside Chloride